अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण प्रोसेसर चिप्स सकिन थालेको विश्वकै ठूलो (बिक्रीका आधारमा) स्मार्टंफोन कम्पनी हुवावेले जनाएको छ । हुवावेको उपभोक्ता व्यवसाय एकाईका सीईओ रिचार्ड यूले चिनियाँ फोन निर्माताले लामो समयसम्म किरिन चिपसेट बनाउन नसक्ने बताएको छ । अमेरिकाबाट आएको आर्थिक दबाबका कारण यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
लोकप्रिय रहेको चिनियाँ मेसेजिङ एप विच्याटमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्धले एप्पललाई विनासकारी प्रभाव पर्न सक्ने छ । यसले आईफोन निर्माताको बिक्री चीनमा घट्न सक्ने छ । आईफोनका लागि चीन आकर्षक बजार रहदै आएको छ ।
चीन–भारत तनावकाबीच पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा द्विपक्षिय व्यापारमा वृद्धि भएको छ । लद्दाखमा हिंस्रक झडप भएपछि भारत सरकारले चिनियाँ आयातमाथिको निर्भरता कम गर्ने उद्देश्यले केही ठोस कदम उठाएको छ, जसमा चीनबाट आयात हुने टिभी, मोबाइल फोनको आयातमाथि अंकुश लगाउने विषय पनि समावेश छ ।
विश्वव्यापी महामारी कोरोनाभाइरसबाट पुरै विश्व प्रभावित भएको छ । यो घातक भाइरसबाट कयौ देशको अर्थव्यवस्थामा असर परेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक मुलुकका सरकारले कुनै न कुनै प्रकारको छुट दिइरहेका छन् ताकी नागरिकलाई धेरै समस्याको सामना गर्नु नपरोस । यसैबीच अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको एक काउन्टीले कोरोनाभाइरस संक्रमणको पुष्टि भएमा प्रति व्यक्ति करीब डेढ लाख रुपैयाँ सहयोगको. रुपमा उपलव्ध गराउने छ ।
हालसालै गरिएको एक सर्वेक्षणले चीनका करिब ६४ प्रतिशत बालबालिकामा ‘आत्मकेन्द्रित’ स्वभाव रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताले दिएको जवाफका आधारमा गरिएको मूल्याङ्कनमा आफ्ना बालबालिका बढी अहंकारी भएको पाइएकोमा अविभावकले चिन्ता व्यक्त गरेका पनि ‘चाइना यूथ डेली’ले जनाएको छ ।
बेलायतमा यो महिनाको अन्त्यसम्ममा पुनः एक पटक लकडाउन लगाउने स्थिति बन्न सक्छ । बेलायत सरकारका पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकार सर डेभिड किंगले आइतबार यस बारेमा सरकारलाई सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्रीले यो स्थितिबाट बच्नका लागि अहिलेदेखिनै उपाय खोज्नु पर्ने बताए । डेभिड किंगले भने,“हामीलाई सेप्टेम्बरसम्म उचित परीक्षण र ट्रेसिङको व्यवस्था आवश्यक छ । अन्यथा स्कुललाई पूर्ण रुपमा खोल्ने पैmसलाले हामीलाई पुरानै स्थितिमा लैजान सक्छ ।” स्कुल पुनः सुरक्षित रुपमा खोल्ने स्थिति निकट भविष्यमा नभएको उनले थपे ।
कोभिड–१९ को महामारीको समयमा उडानको माग छैननै भनेपनि हुन्छ । यस्तो समयमा हजारौको संख्यामा रहेका यात्रु प्रयोजनका विमान कहा थन्क्याएर राखिएका छन् त ? यो सवाल तपाई हाम्रो मन मस्तिस्कमा आउनु स्वाभाविकै हो । यात्रु विमानलाई हालको समयमा कुनै टाढाको स्थानमा पार्क गरेर राखिएका छन् ।
विश्व स्तरीय अनलाइन ‘-याली अफ होप’ (आज) आइतबार आयोजना हुँदैछ । २१ औं शताब्दीमा मानव जातिले भोग्नुपरेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न तथा अन्तरनिर्भरता, पारस्परिक समृद्धि र सर्वव्यापक मूल्यमान्यता साकार गर्ने उद्देश्यले (आज) आइतबार -याली अफ होप हुन लागेको हो । उक्त -यालीमा नेपाली समयअनुसार आइतबार ६.४५ बजे अनलाइनमार्फत सहभागिता जनाउन सकिनेछ । विश्वभरिका लाखौं मानिसको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ ।
जब कोही शोरुममा कार किन्न जान्छ, त्याहाँ भएका सेल्सम्यानले ग्राहकलाई कारको बारेमा जानकारी दिएर कार बिक्री गर्ने गरेको हामीले देख्ने गरेका छौ । तर शोरुममा मानिस नभई कुकुर कार बिक्री गरिरहेको छ भने पनि आश्चर्य नमान्नुस । यो सेल्सम्यान ब्राजिलको हुन्डाई कम्पनीको कार शोरुमको हो । यहाँ कुकुर सेल्सम्यानको रुपमा काम गर्छ । कम्पनीले कुकुरलाई आधिकारिक रुपमा सेल्सम्यानको रुपमा नियुक्त गरिएको छ र परिचय पत्र (आईडी कार्ड) कुकुरको घाटीमा लगाइएको छ ।
अस्ट्रेलियामा गत गृष्मकालिन समयमा उखरमाउलो गर्मीका कारण जंगलमा आगलागी भएर अर्बौ जनावर मरेको समाचार हामीले संचार माध्यमबाट जानकारी पाएका थियौ । तर हाल आएर यो मुलुकको तास्मानियामा हालसम्मकै चिसो भएको छ । देशका बाँकि भाग मुसलधारे पानी पर्ने तयारीमा रहेकोमा यो क्षेत्रमा रेकर्ड राख्न थालिएदेखिकै चिसो अर्थात् –१४.२ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ ।
कोरोनाभाइरसको महामारी अझैपनि आधा दसक सम्म चल्ने विश्वव्यापी स्वास्थ्यका एक वरिष्ठ अधिकारीले चेतावनी दिएका छन् । विश्वव्यापी मृतकको संख्या ३ लाखको नजिक पुगेसँगै संगठनकी प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथले बताएको फाइनान्शीयल टाइम्सले जनाएको छ । “मैले अझै ४ वा ५ वर्षको समयसीमा देखेकी छु । हामीले यो अवधिमा यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौ,” उनको भनाई थियो । हालका लागि खोप राम्रो उपाय देखिएको तर यसको सुरक्षाको विषयमा अझैपनि प्रसस्त मात्रामा किन्तु परन्तुको अवस्था रहेको छ । प्रभावकारी खोपको विकास र सफल उपचारको विधि दुवैले महामारीको अवधिलाई निर्धारण गर्ने उनले बताएको फाइनान्शीयल टाइम्सले जनाएको छ ।
टिकटकलाई युरोप स्वर्ग
हुवावेले कठोर अवस्थाको सामना गरेपनि हाल सम्म युरोपले चिनियाँ भिडियो सेयरिङ एप टिकटकलाई राम्रो गरिरहेको छ । ब्रसेल्सले प्रविधिको विषयमा अमेरिका र चीनबीचको कठोर अवस्थाको सामना गरेपनि ईयूले अमेरिकी नेतृत्वलाई पछ्याउने अवस्था भने देखिएको छैन । यो एप अमेरिकामा देखिए जस्तै तात्तातो विषय युरोपमा देखिएको छैन । युरोपका नियामकहरुले हालसम्म पनि कम्पनीमा कस्ले लगानीको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइसकेका छैनन् ।
फेसबुकले आफ्ना कर्मचारीलाई २०२१ को जुलाईसम्म घरबाटै काम गर्नका लागि भनेको छ । उनीहरुलाई कार्यालयको आवश्यक सामग्रीका लागि १००० डलर पनि दिइने सामाजिक संजालका प्रवक्ताले बताएका छन् । अन्य प्रविधि कम्पनीहरुले पनि यसै किसिमको रणनीति अवलम्वन गरेकोमा फेसबुक पनि उनीहरुको कार्यशैलीमा प्रवेश गरेको छ ।